Wada-hawlgalayaasha | Shandong Dingtaisheng Makiinado Technology Co., Ltd.
Royal Foods VietNam Co., Ltd. waa mid ka mid ah soosaarayaasha ugu waawayn ee Sardine Canned, Mackerel oo ku yaal wadamada Koonfur-bari Aasiya, kuna hoos jira magaca sumadda "Three Lady Cooks Brand" oo adduunka laga aqoonsan yahay laguna kalsoon yahay.
Shirkada Khanh Hoa Salanganes Nest waa shirkada hormoodka ka ah maaraynta iyo ka faa'iideysiga kheyraadka dabiiciga ah ee aan qiimaha laheyn ee VietnamNam. In kabadan 20 sano oo horumar waara ah, Shirkada Khanh Hoa Salanganes Nest waxay si joogto ah dadaal ugu jirtay soo saarida iyo kala duwida wax soo saarkooda si loogu soo bandhigo wax soo saar tayo sare leh suuqa ugana keento macaamiisha qiimaha nafaqada ee buulka.
Kooxda Mayora ayaa markaa si rasmi ah loo aasaasay 1977 tan iyo markaasna waxay u kortay inay noqoto shirkad caalami ah oo la aqoonsan yahay oo ku taal Warshadaha Alaabada Macaamiisha Degdega ah. Hadafka kooxda Mayora waa inuu noqdo xulashada ugu badan ee doorbidaya cunnada iyo cabitaanka ee macaamiisha waxayna siinayaan qiime dheeri ah daneeyayaasha iyo deegaanka.
Wings waxaa loo aqoonsan yahay koox ganacsi oo sifiican loo aasaasay isla markaana caqli gal ah gudaha Indonesia oo leh xoog gaar ah soo saarida saabuunta iyo saabuunta. Waxyaalaha baalasha ayaa loo aqoonsan yahay tayadooda iyo awooddooda, waana la heli karaa.
Mahadsanidiin mashiinada tayada sare leh ee DTS iyo adeega aadka ufiican, DTS waxay kasbatay kalsoonida baalasha, sanadii 2015, baalasha waxay soo bandhigeen DTS dib udhigista iyo makiinada wax lagu kariyo ee boodhadhka xawaashka baastada udhiganta ah.
Maaddaama ay tahay soo-saaraha hoggaamineed ee Thailand una dhoofiya badeecado qumbaha oo tayo sare leh, mfp wuxuu soo bandhigayaa khad ballaaran oo wax soo saar ah oo u dhexeeya caanaha qumbaha iyo kareemka, casiirka qumbaha, soosaarka qumbaha, ilaa saliidda qumbaha.
Xilligan, shirkaddu waxay soo saartaa ku dhowaad 100% dakhliga ka soo gala dhoofinta suuqyada adduunka - oo ay ku jiraan kuwa Yurub, Australasia, Bariga Dhexe iyo gobollada Waqooyiga Ameerika.
"EOAS" waa magac u dhigma saliidaha udgoon ilaa 1894. Ilaa 1999 EOAS waxay kujirtaa inay tahay dhoofiyaha saliida ugu muhiimsan ee ugu muhiimsan Sri Lanka Laga soo bilaabo sanadka 2017, EOAS waxay leedahay bunni cusub oo ah caano qumbaha qasacadaysan. DTS waxay siisaa qalab ay ka buuxiso badmaaxiyaha, dib u celinta, qalajiyaha rarka rarka, calaamadeeyaha iwm si ay u balaadhiyaan suuqooda.
Cabitaanka Ceylon Can waxaa la aasaasay 2014 isaga oo ah daasadaha aluminium madaxbannaan waxayna dhammaataa soo saaraha ku saleysan Colombo Sri Lanka. Mashruucooda kafee ee qasacadaysan oo OEM loogu talagalay Nestle, DTS waxay bixisaa dib-u-soo-celin, soo-dejiye buuxa oo otomaatig ah, gawaarida korantada iwm.
Brahims (calaamadda warshadaha Cuntada ee Dewina) waxay la mid tahay cunno macaan, habboon, oo diyaar u ah in la cuno. Waxaan u fidineynaa dib u soo celinta nadiifinta iyaga, waxaan bedelnay sumadda Japan. Dib-u-celinta ayaa isticmaaleysa mid aad u wanaagsan oo la barbardhigay mid ka mid ah soo-saaraha wax soosaarka Japan, macaamilku wuxuu siinayaa qadarin sare DTS sida hoos ku xusan:
Delta Cunnada Warshadaha FZC waa Shirkad Aag Bilaash ah oo fadhigeedu yahay Aagga Bilaashka ah ee Madaarka Sharjah, UAE oo la aasaasay 2012. Delta Cuntooyinka Warshadaha FZC wax soo saarkooda waxaa ka mid ah: Paste Pasto, Tamaandho Ketchup, Caano uumi baxday, kareem nadiif ah, Suugo kulul, Caano Caano Buuxda, Oats, Galeyda, iyo budada Custard. DTS waxay bixisaa laba nooc oo buufin biyo ah iyo rogaal celin loogu talagalay in lagu nadiifiyo caano iyo kareem uumaysan.
Sannadkii 2019, DTS waxay ku guuleysatay mashruuc-ka-cabbitaanka kafeega ee shirkadda Nestlé Turkey OEM, oo siineysa qalab buuxa oo loogu talagalay soo-celinta jeermiska jeermiska looga baafiyo biyaha, iyo ku xiridda mashiinka buuxinta ee GEA ee Talyaaniga iyo Krones-ka Jarmalka. Kooxda DTS waxay si adag u qancineysaa shuruudaha tayada qalabka, xalalka adag ee farsamada, ugu dambeyntiina waxay ku guuleysteen ammaanta macaamilka ugu dambeeya, khubarada Nestlé ee ka socota Mareykanka iyo xisbiga saddexaad ee Koonfurta Ameerika.
Bonduelle wuxuu ahaa sumaddii ugu horreysay ee khudaarta warshadaysan ee Faransiiska laga sameeyo si loo abuuro khad u gaar ah khudaarta qasacadaysan ee keli ah ee loo yaqaan Bonduelle "Touche de," oo la cuni karo midkoodna ha ahaado mid kulul ama qabow. Crown waxay la shaqeysay Bonduelle si loo soo saaro khadkan baakadaha qayb ka kooban oo ay ku jiraan afar nooc oo khudaar ah: digirta cas, boqoshaada, digaagga iyo galleyda macaan.
Sannadkii 2008, dts waxay siisay biyo-nadiifiyaha ugu horreeya ee buuxa ee lagu buuxiyo warshadda qingdao ee Shiinaha si loo soo saaro caano uumaysan oo qasacadaysan. Waxay si guul leh u bedeshay isla nooc ka mid ah qalabka lagu sameeyay Jarmalka. Sanadkii 2011 dts waxay siisay 12 nooc oo ah sterilizer roogayaasha uumiga ah ee dts-18-6 jinan yinlu (awooda 600cpm) ee soosaarka isku dhafka isku dhafan.